အောင်မြင်သောနည်းပညာပွဲတော်အတွက်သင်၏စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း! | Martech Zone
ဒီနောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေ, ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးကန် တေးဂီတ၊ စျေးကွက်နှင့်နည်းပညာအလယ်အလတ် အဖြစ်အပျက် (#MTMW) - ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကငါတို့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ငါ့ဖေဖေကိုအမှတ်ရဖို့အတွက်သွေးကင်ဆာနဲ့ Lymphoma လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ငွေရှာဖို့ဒီနေရာမှာ Indianapolis မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်။ ဒီဟာကကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ပထမဆုံးပွဲဖြစ်ပြီး၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအောင်မြင်ခဲ့ရကြောင်းနှင့်အခြားသူများအားထိုးထွင်းသိမြင်စေလိုသည်။
ကျနော်တို့လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် နည်းပညာပွဲတော် လာမယ့်မကောင်းတဲ့ PowerPoint ကြောင့်မျက်ရည်ကျဖို့ငြီးငွေ့စရာဖြစ်မယ့်အစား၊ လူတွေဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြေလည်အောင်၊ လူမှုရေးပြေလည်အောင်လုပ်ဖို့ပျမ်းမျှပျင်းစရာညီလာခံမဟုတ်ဘဲ။ တက်ရောက်သူများသည်စပွန်ဆာများနှင့်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ကမ်းလှမ်းချက်များကိုအကဲဖြတ်ရန်ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်မိန့်ခွန်းများမပါပဲ။
မေတ္တာ - သင်၏အဖြစ်အပျက်မည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ ပွဲမှရရှိသောအကျိုးအမြတ်အချို့ကိုတိကျစွာပရဟိတလုပ်ငန်းသို့သွားရန်သေချာစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်စဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရရှိငွေ၏ ၁၀၀% ကိုသွေးကင်ဆာနှင့် Lymphoma လူ့အဖွဲ့အစည်းသို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။ တက်ရောက်လာသူများသည် ၄ ​​င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ငွေစုဆောင်းခြင်းအစီအစဉ်များကိုမိမိတို့နှင့်အတူတကွစတင်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် # run4doug
စပွန်ဆာ - လှူဒါန်းမှုရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဆိုင်းဘုတ်များ၊ လက်ဆောင်ကတ်များ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ အစားအစာနှင့်တေးဂီတများအတွက်စပွန်ဆာများရှာဖွေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စပွန်ဆာများနှင့်အတူတကွကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်မည်သို့သိုသိုသိပ်သိပ်တွေ့နိုင်သည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။
Venue - မှန်ကန်သောနေရာသည်အရေးကြီးသည်။ ငါတို့ရွေးခဲ့တယ် Rathskeller Indianapolis မှာနေရာတိုင်းကနေ ၀ င်ရောက်နိုင်တဲ့ခေတ်မှီတဲ့မြို့ရဲ့အဓိကကျတဲ့အချက်အချာကျတဲ့နေရာမှာဘီယာဥယျာဉ်တစ်ခု၊ ဘားတစ်လုံးနဲ့ဘောလုံးခန်းတစ်လုံးရှိတယ်။ အားလုံးမှာတေးဂီတကိုဖွင့်ဖို့အဆင့်တွေ၊ ၀ န်ထမ်းများက၎င်းကိုအောင်မြင်စေရန်ရှိခဲ့ပြီးမျှော်လင့်ချက်များအားလုံးထက်ကျော်လွန်ခဲ့သည်။
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး - Dittoe PRဖြစ်ရပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဒေသခံရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယို၊ သတင်းစာနှင့်အွန်လိုင်းမီဒီယာများနှင့်လပေါင်းများစွာမမောနိုင်မပန်းနိုင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကြောင့်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပါ။
လူမှုမီဒီယာ - ကျွန်ုပ်တို့သည်လူများအားလာမည့်သွေးဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ site နှင့်လူမှုမီဒီယာလိုင်းများတွင်နေ့တိုင်းနီးပါးတင်ခဲ့သည်။ ပိုမိုသိရှိနားလည်မှုရရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ Facebook နှင့် Twitter တွင်လည်းကြော်ငြာခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် ဆိုက်မဟာဗျူဟာပွဲကိုလူမှုရေးအရရော၊ ငါတို့အတွက်ပါမြှင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဒေသခံရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရေဒီယိုပြ.
ဂီတ - Blues မှ Bluegrass နှင့် Folk အထိ Jazz အထိဂီတအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာခန်းမမှာ high-definition virtual concert တွေတောင်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ် လေထု.
အဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှု - Steve Gerardi သည်ဒေသတွင်းပွဲစီစဉ်သူဖြစ်ပြီး၊ လိုအပ်သည်များကိုအသေးစိတ်စီစဉ်ပြီးစီစဉ်ထားသည်ကိုသိသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်ကွပ်မျက်ခြင်းတစ်လျှောက်လုံးသူသည်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ။
အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း - တက်ရောက်သူများသည်အွန်လိုင်းတွင်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ဂိတ်တွင်aည့်သည်စာရင်းနှင့်သူတို့နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်ပေးချေနိုင်သောအိုင်ပက်ဒ်များပါရှိသည်။ လက်မှတ်တွေအစားကျနော်တို့ဖြန့်ဝေ အရောင် - coded လက်ကောက်ဝတ်ခညျြအနှော စပွန်ဆာများ၊ လူကြီးများ၊ ကလေးများနှင့်အဖွဲ့များအားလုံးသည်လွယ်လွယ်ကူကူမှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရောင်များရှိသည့်နေရာတွင်ရှိသည်။
ဆိုင်းဘုတ် - ဓာတ်ပုံများ၊ နဖူးစည်းစာတန်းများနှင့်လက်ကမ်းကြော်ငြာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများ၊ မြေပုံများ၊ အနီရောင်ကော်ဇောနောက်ခံလိုအပ်သည်။ မယုံကြည်နိုင်လောက်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည် PERQ သူတို့အားပြုရ။
ဆု - PERQ သူတို့ရဲ့ပရိုဂရမ်မာ FATWIN kiosk တက်ရောက်သူတိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဆုအနိုင်ရနိုင်သည့်ဖြစ်ရပ်မှာ။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာခန်းမကိုခြေလျင်တိုးလာစေပြီးတက်ရောက်လာသူအားလုံးဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်အတူအိမ်ပြန်ခဲ့ကြသည်!
သံကို - အသံဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာငါမပြောနိုင်ဘူး။ တေးဂီတနှင့်လူများ၏ဟန်ချက်ညီညီမျှတမှုရှိခြင်းကြောင့်လူတိုင်းကအသံကျယ်လွန်းခြင်းမရှိဘဲပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ လူတွေဟာစကားစမြည်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပြီးနောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့စွမ်းရည်ကိုကြားနိုင်ကြသေးသည်။ စပွန်ဆာများပိုမိုအာရုံစိုက်လာစေရန်နည်းပညာခန်းမသည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ဦး ဆောင်တဲ့ပိရမစ်အသံလုပ်ငန်း Mike Ottinger အသံကို ဦး ဆောင်ခဲ့သူကအံ့သြဖွယ်ပဲ!
T-ရှပ်အင်္ကျီဝတ် - အဆိုပါအနုပညာစာနယ်ဇင်း ရောင်းလိုက်သောပွဲတော်အတွက်အထိမ်းအမှတ်တီရှပ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့သည် (သို့သော်မေလ ၁၀ ရက်အထိအွန်လိုင်းတွင်၎င်းတို့ကိုအွန်လိုင်းတွင်သင်မှာယူနိုင်သည်) ။ ၀ န်ထမ်းများတွင်နောက်ကျောတွင် STAFF ပါသောတီရှပ်များပါရှိသည်။ Art Press မှကုန်ပစ္စည်းစားပွဲတစ်ခုကိုလည်းထူထောင်ခဲ့ပြီးအကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုလက်ခံပြီးအွန်လိုင်းမှမှာယူသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုပင်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။
စားနပ်ရိက္ခာ & သောက် - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဂျာမန်မီနူးကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်စာရင်းသွင်းခဲ့သည် ဒေသခံနယူးယောက် Pizzeria ဖြစ်ရပ်မှတံခါးဝမှာသူတို့ရဲ့အစားအစာထရပ်ကားရပ်ဖို့။ နေရာနှစ်ခုစလုံးကသူတို့ဟာတကယ့်ကိုအံ့သြဖွယ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးလူအုပ်ကဆာလောင်နေတယ်။ နေရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာဘားတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအရက်သောက်ရန် fol ည့်သည်များအဆင်မပြေပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘောလုံးခန်းရှိသည်။
အားသွင်းစက်များ - လူတိုင်းတွင်ဖုန်း ရှိ၍ သူတို့အားလုံးအားသွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကွမ်းခြံကုန်း သူတို့ရဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစမတ်အားသွင်းစက်တွေကိုထုတ်ပေးလိုက်ပြီးတစ်နေ့လုံးဓာတ်ပုံတွေဝေမျှနိုင်ခဲ့တယ်။ ဘက်ထရီမရှိတာကမျှဝေမှုမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။
ဗွီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံများ - ငါတို့ယူလာကြသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ရပ်ဓာတ်ပုံဆရာ ပြည်နယ်အတွက်, ပေါလု D'Andrea ။ ငါတို့တွင် Daniel ဇာက်၊ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူ ဇာတ်လမ်းပြောခြင်းကိုအထူးပြုသူသည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၊ ကင်မရာများနှင့် GoPros စုဆောင်းခြင်းနှင့်မရပ်မနားစွမ်းအင်တို့ပါ ၀ င်သည်။ (ကျွန်ုပ်ရေးသည်နှင့်အမျှဗွီဒီယိုများသည်ဒေါင်းလုဒ် လုပ်၍ ရောနှောနေသည်)
programs ကို - အသေးစားပရိုဂရမ်လေးသည်အလွန်ကြိုဆိုသောလူများ၊ အရေးကြီးသောအချိတ်အဆက်များ၊ စပွန်ဆာများ၏ဖော်ပြချက်များနှင့်သူတို့အတွက်အချိန်ဇယားများကိုပေးစွမ်းလိမ့်မည်။
စပွန်ဆာလည်ပတ်မှုများ - Bingo ပုံစံကဒ်ကို အသုံးပြု၍ FATWIN ကိုကစားရန်အတွက်စပွန်ဆာတစ် ဦး ချင်းစီမှတံဆိပ်တုံးကိုရရှိနိုင်မည့်နည်းပညာကဒ်ပြားတစ်ခုစီသို့သွားလာမှုပိုမိုများပြားလိမ့်မည်။
မှတ်စုတစ်ခု - ငါအတွက်ရွေးချယ်ခံရခြင်းဖြစ်သည် တစ်နှစ်တာ၏ယောက်ျား & မိန်းမ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့်သင်ဆဲနိုင်ပါတယ် မေလ ၁၀ ရက်မှတစ်ဆင့်လှူဒါန်းပါ!
Tags: အရက်အားသွင်းဘူတာများမေတ္တာdittoe prသောက်စရာအဖြစ်အပျက်အဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှုfacebook ဖြစ်ရပ်ပွဲတော်ပွဲတော်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအစာမိုက်ကယ် Ottingerဂီတprပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးပိရမစ်အသံကအလုပ်လုပ်တယ်လူမှုရေးကြော်ငြာများလူမှုရေးမြှင့်တင်ရေးအသံကSteve Gerardiတီရှပ်t-ရှပ်အင်္ကျီနေရာ